Kubvunzana naMoisés Rivera kubva kuRed Hat, Ndedzipi shanduko dziri kuuya? | Linux Vakapindwa muropa
Red Hat's Moisés Rivera: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA
Mushure mekugadzira RHEL8 ongororo, ichiratidza zvimwe zvezvinhu zvitsva zvechigadzirwa chitsva, izvozvi Moisés Rivera naRedHat inotipa iyi hurukuro inonakidza chete yeLxA. Moises ndiyo Principal Solution Architect - Cloud, Automation & Infrastructure Team Inotungamira paRed Hat uye ine zvinhu zvinonakidza kutitaurira nezve itsva yekushandisa sisitimu yenzvimbo dzemazuva ano dzebhizinesi uye zvakare izvo izvo ramangwana rakabata.
In the hurukuro yapfuura takava nerombo rakanaka kuva Julia Bernal naMiguel Ángel Díaz vanobva kuRed Hat. Ini ndinongo wedzera kuti ndinovimba unoifarira uye ndinokukoka iwe kuti uverenge zvakazara ...
Linux Vanopindwa muropa: RHEL 8 ndiyo yazvino vhezheni yenguva ino. Inotevera ichave iri mukati meBMM mushure mekuwanikwa kweRed Hat. Iko kushandurwa kunorevei padanho rehunyanzvi?
Moses Rivera: Isu tinotenda kuti iro remasanganiswa gore rinotanga neLinux, uye isu takagadzira Red Hat Enterprise Linux sehungwaru, yakawanda-gore yakasanganiswa sisitimu inoshanda yechinangwa ichi. Isu tinoziva kuti makambani anofanirwa kufambisa basa-rakakosha mabasa kune gore kuti vagadzirise uye kuvandudza mabhizinesi avo, nepo vachigadzirisa kwavo matekinoroji tekinoroji zvese zviri-munzvimbo uye nepakati pemakore akasiyana, zvese zvakavanzika uye neruzhinji, kubva kune yakasanganiswa, yakapusa uye inowirirana nzira. Isu tinoziva kuti masangano arikutsvaga yakajairika, inowanika nyore uye inowirirana nharaunda munzvimbo dzeruzhinji uye dzakavanzika gore nharaunda nechinangwa chekukurumidza uye nekukurumidza. Chinangwa chedu chekutyaira Linux senheyo yegore rakasanganiswa gore rinoramba rakangofanana mushure mekunge chibvumirano chavharwa, sezvo isu tichizoramba tichiendesa pachena kuvhura kumabhizinesi pane yakachengeteka, yekugadzira-yakagadzirira chikuva.
Chinonyanya kukosha, Red Hat ichashanda sechikamu chakasiyana mukati meBMM, kuchengetedza rusununguko rwedu uye kusarerekera. Pakati pezvimwe zvinhu, izvi zvinoreva kuti Red Hat zvinopihwa, kusanganisira Red Hat Enterprise Linux, ichagadziriswa neRed Hat, iine Red Hat-yakatsanangurwa nzira dzemigwagwa, uye kuti yedu yekumusoro-yekutanga nzira (kuendesa chigamba kana kugadzirisa kune munyori yekutanga software saka kuti inosanganisirwa musoftware sosi kodhi) uye hutungamiriri munzvimbo yakavhurika sosi nharaunda zvicharamba zvisina kuchinja.
LxW: Mushure mekubatanidzwa iwe unenge wave kambani yakati siyanei, ikozvino uchave unopa software uye Hardware zvakare. Pachave nerumwe rudzi rwekuwedzera kukwidziridzwa kweiyo IBM zvigadzirwa (SIMBA, z / Architecture,…) kana iro ramangwana RHEL richaramba richishanda nemazvo pane chero chikuva?
M.R.: Red Hat inoramba iri cheni isina kwayakarerekera mukati meBMM, yakanangana chete nekuburitsa yakavhurika sosi bhizinesi tekinoroji kusimbisa iyo yakasanganiswa gore. Red Hat yatove inopa yakafutisa portfolio yehurongwa hwezvivakwa inotsigira huwandu hwakawanda hwevatengesi vezvigadzirwa uye masisitimu, kusanganisira POWER neSystem Z. Isu tinotarisira kuenderera mberi nekufambisa nzira iyi yekutsigira huwandu hwakawanda hwehardware zvichienderana nezvinodiwa pamusika.
LxW: Mishini yese yeIBM HPC ichaenda kunoshanda neRHEL izvozvi here kana ivo vacharamba vachichengetedza akasiyana masisitimu anoshanda sepakutanga?
M.R.: Red Hat uye IBM inotarisira kupa dzakasiyana siyana hybrid gore mhinduro kumakambani kutenderera pasirese uye mumaindasitiri ese. Kuzvipira kwedu kusarudzo yevatengi maererano nehurongwa uye software inosanganisira kuwedzera Red Hat Enterprise Linux kune musanganiswa weinotsigirwa matekinoroji eHPC. Sarudzo yevatengi yakakoshawo kune IBM, uye tinovimba kuti icharamba ichipa mhinduro dzinotsigira akawanda masisitimu anoshanda.
LxW: Kudzokera kuRHEL 8, nderipi rakave dambudziko guru rawakatarisana naro mukusimudzira kwaro?
M.R.: Iyo IT yepasi haina kumira. Zvinetso zvakajairika izvo masangano emabhizimusi eIT akasangana nawo panguva yeRed Hat Enterprise Linux 7 kuburitswa hazvifanane zvakafanana neyavari kusangana nawo patakaburitsa Red Hat Enterprise Linux 8. Kunyanya, midziyo yeLinux.uye Kubernetes zvave kuwedzera kukosha kumakambani. kutsvaga dhijitari shanduko uye yakasanganiswa gore kutorwa. Izvi zvinoita kudenha kwedu kukuru neRed Hat Enterprise Linux 8, uye nechero vhezheni yeRed Hat Enterprise Linux, ndeyekutsvaga nzira yekugadzirisa kufambira mberi kwetekinoroji nematambudziko anogona kutora mwedzi, kana asiri makore, kubva pakuvambwa. Uye zvakare, Cloud Computing inoda danho rekuyera ratisina kumboona. Isu taifanirwa kushandura paradigm yedu kutarisa manejimendi pachiyero, mashandiro, uye kuwanika kwepamusoro sehunhu hwepamoyo hwemabasa edu ekusimudzira uye kwete sechinhu chatinowedzera pane gare gare.
LxW: Chii chaunonyanya kudada nazvino kuti RHEL 8 inowanikwa pakupedzisira?
M.R.: Red Hat Enterprise Linux 8 idanho rakakosha mukuwedzera kusimbisa nhoroondo yedu yekubatsira vatengi vedu kuona mabhenefiti eiyo Open Hybrid Cloud. Isu tinodada nekuvhura yazvino mashandiro ehurongwa hwekushandisa iyo inopa mupendero kune ese echinyakare uye ari kubuda (gore-based uye mudziyo-wakavakirwa) mabasa. Red Hat Enterprise Linux 8 zvakare iri hwaro hwakasimba hweiyo Red Hat portfolio uye chinhu chakakosha chemhinduro iyo vatengi vedu vanotarisira Red Hat kuvabatsira nayo. Izvi, chokwadika, hazvaigona kuitika dai zvisiri zvetsika yedu yakavhurika, mweya wedu wekushandira pamwe, kuda kwedu kugovana ruzivo, kuzvipira kwedu kune vamwe, uye kuzvipira kwedu kuzere pakuva nharaunda yenzvimbo dzakashama dzinowanikwa .
LxW: Kana ndikarangarira nemazvo, RHEL 8 inowanikwa ye AMD64 (EM64T), ARM, IBM Z uye IBM POWER… Munguva pfupi yapfuura RISC-V yakabuda uye iri kuwedzera simba, dzimwe nyanzvi dzinoti maseva achasvika mukati memakore mashanu. Inogona kutsigirwa mushanduro 5 kana 9…?
M.R.: Red Hat inoenderera mberi nekukurudzira hukama hwehukama neenyika inotungamira yesilicon maOEMs uye vatengesi uye vachabatana navo kuunza ayo anotungamira Hardware mapuratifomu kumusika.
Parizvino RISC-V ndeimwe yemamwe mapuratifomu mukusimudzira kweFedora (https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/RISC-V); saka ndiyo nhanho yekutanga - kukwira kumusoro-kutanga - kuwana Red Hat Enterprise Linux yeRISC-V. Sarudzo yedu yekuisa RISC-V mune inotsigirwa dhizaini - sekune vamwe vese - ichave inoenderana nezvinodiwa pamusika webhizimusi uye padanho rekukura kwezvisikwa.
LxW: Iko kukura kweprojekiti senge RHEL 8 inotanga sei? Ndokunge, kutanga nharaunda inoshanda kugadzira Fedora, uye kana uchinge wawana hwaro, ndeipi tsika yevagadziri kuti vawane RHEL?
M.R.: Sezvandambotaura, Red Hat inotevera "yekukwira kumusoro" mutemo wezvese zvigadzirwa zvedu, kusanganisira Red Hat Enterprise Linux. Sezvo isu tichishanda pamwe nenharaunda kutyaira hunyanzvi, isu tinogadzirisa maficha eetekinoroji kune kudiwa kwevatengi vebhizinesi, kubva kuOCI yekuteedzera mudziyo wezvekushandisa, senge Podman, Buildah, Skopeo ... kana iyo nyowani package package Red Hat Enterprise Linux 8 RPM (BaseOS, Application Streams, uye CodeReady Builder - https://developers.redhat.com/blog/2019/05/07/red-hat-enterprise-linux-8-now-generally-available/) iyo inopa hukuru hwakachinjika. mukuvandudza kwekushandisa.
Isu tinotora mapurojekiti akaenderana nezvinodiwa izvi uye totanga kubatanidza uye nekuvanatsiridza kuti ave emabhizimusi-giredhi zvikamu, izvo zvinogona kutsigirwa mukati megumi nemana emakore hupenyu hupenyu hweRed Hat Enterprise Linux - https: // access .redhat.com / support / policy / updates / errata - uye nezviuru zvehurongwa uye kugadziridzwa kwegore mukati meRed Hat ecosystem.
LxW: Iro gore, midziyo, kuverengera, AI,… iwe unofunga kuti chii chichava chinetso chinotevera? Iwe unoramba uchinatsiridza iyo minda yekuburitswa kunotevera here kana kuti kune imwe tekinoroji iri kubuda yauri kunyatso kutarisisa?
Pasina mubvunzo, iyo nyowani nharaunda inonongedza kune kushandiswa kwehunyanzvi hwekuchenjera pane zvese zvazvino mhinduro: Blockchain, Edge komputa, IoT, pakati pevamwe, sezvo ichizopa hunhu uye huwandu hwekukwakuka kumatekinoroji aripo aripo.
M.R.: Kiyi yekugona kuvandudza kana iwe kana uchida kuita zvinhu zvitsva, shandisa njere dzekunyepera kumhinduro dziripo kana mune chero rudzi rwekusimudzira, kugadzira hwaro hwakasimba uye hwakavhurika hwaro hunopa kusimba kwebhizinesi uye nyore kushandisa uye kuchinjira kuchitsva mitoro, sezvinoita Red Hat Enterprise Linux 8 inoita, ichipa iyo inonaka zvakafanana kunharaunda dzese, zvisinei nemamiriro epanyama / chaiwo / gore mamiriro ari kuita mutoro. Kwatinoenderera mberi tichitarisa kugadzira matekinoroji ese kuti ashandiswe uye asanganiswe nemhinduro dzinopa vatengi vedu makwikwi ezvemusika.
LxW: Cloud computing, Edge komputa, Fog komputa…. Iwe unofunga yako ramangwana mashandiro masystem anozopihwa sevhisi uye inomhanya pamashini makuru? Mune mamwe mazwi, zvishandiso zvevashandisi vako zvichava vatengi vakareruka vanogona kushandisa kugona kwegore iro? Kana ivo vacharamba vachimhanya "yemuno"?
M.R.: Red Hat Enterprise Linux ndeye general-chinangwa inoshanda system iyo nedudziro inotsigira mitoro yebasa kuburikidza netsoka dzakasiyana dzekutsikisa. Isu tinotenda kuti munguva pfupi nepakati zvichave zvakakosha kutsigira echinyakare maficha ayo anoda kutora mukana wekuvandudza kwekuita kwemapuratifomu matsva ehurdware. Edge komputa iri kuwedzera kufamba ichienda kumucheto kugadzirisa uye pfungwa ye "mutete mutengi" yachinja kubva kungova "mbeveve" mutengi uyo anotumira ruzivo rwese kune central processing server. Isu tinoona yakanaka kukurumidza kufambisa basa munzvimbo yakasarudzika uye yeruzhinji nharaunda nharaunda, iyo inoda iyo imwechete SLA uye mashandiro maitiro seanhasi mabhizinesi ekuremekedza. Isu tine chivimbo chekuti Red Hat Enterprise Linux ichagutsa zvese zvechivanhu uye zvinobuda mutoro webasa, zvisinei nekutakurwa kwetsoka.
LxW: Iwe unoshanda mune imwe mhando yekutendeuka kana kuve inoshanda sisitimu yakanangana nenzvimbo dzebhizinesi uye HPC hachisi chinhu chinokunetsa iwe?
M.R.: Red Hat Enterprise Linux inopa anoshanda sisitimu yekubata akasiyana siyana kesi dzekushandisa, kubva kune imwechete server basa rekuremerwa kune epasi anokurumidza supercomputers. Red Hat Enterprise Linux yatove kushandiswa neSierra neSummit, supercomputer dzinokurumidza kwazvo pasirese, uye ndiyo imwechete sisitimu yekushandisa iyo vamwe vatengi vedu vanoshandisa mukuita kwavo kwezuva nezuva. Izvi zvinopa vatengi chivimbo chekutumira Red Hat Enterprise Linux chero kupi uye vagone kuita uye scalability yavanoda pane chero tsoka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Red Hat's Moisés Rivera: Yakasarudzika Bvunzurudzo yeLxA